HESHIIS DHACAY: Milan & Fiorentina oo ku heshiiyay Nikola Kalinic! (Goorma ayuu Milano imanayaa?) – Gool FM
(Firenze) 18 Agoosto 2017 – War haatan soo baxaya ayaa sheegaya in la isku afgartay wada hadalladii ay AC Milan ku doonaysay Nikola Kalinic.
Kooxda Fiorentina ayaa la sheegayaa inay haatan ogolaatay inuu laacibku ku biiro kooxda uu calmaday ee Rossonero isagoo ku imanaya 5 milyan oo amaah ah iyo 20 milyan oo ay khasab tahay in sanadka xiga laga bixiyo, taasoo isu gayn ahaan ka dhigan 25 milyan.
Laacibkan oo haatan ku maqan dalkiisa Croatia ayaa la sheegayaa inaan waqti loo muddaynin inuu berri caafimaadka maro, sidaa daraadeed waxay u badan tahay inuu Milano soo caga dhigto midkood Axadda ama Isniinta si uu u maro tijaabada caafimaad.
Klinic oo noqonaya laacibkii 11-aad ee ay Milan xagaagan soo xera geliso isla markaana Milan horay ula heshiiyay ayaa muddo 4 sanadood ah Milan ka qaadan doona 3 milyan sanadkiiba.
11-ka laacib ee ay Milan ilaa haatan soo iibsatey
HORDHAC: Swansea City Vs. Manchester United